Nnwom 61 AKCB - مزمور 61 NAV
1Ao, Onyankopɔn, tie me sufrɛ;
tie me mpaebɔ.
2Mifi asase ano frɛ wo,
mefrɛ wo, efisɛ me koma atɔ beraw;
fa me kɔ ɔbotan a ɛware sen me no so.
3Woayɛ me guankɔbea,
aban a ɛyɛ den ma ɔtamfo no.
4Me kɔn dɔ sɛ metena wo ntamadan no mu afebɔɔ
na manya guankɔbea wɔ wo ntaban nwini ase.
5Woate me bɔ a mehyɛe no, Onyankopɔn;
na wode wɔn a wosuro wo din no agyapade ama me.
6To ɔhene nkwanna mu bebree;
na ne mfe mfi awo ntoatoaso nkodu awo ntoatoaso.
7Ma onni hene wɔ Onyankopɔn anim daa
fa wʼadɔe ne wo nokware bɔ ne ho ban.
8Afei mɛto ayeyi dwom ama wo din daa
AKCB : Nnwom 61